Fanamarihana sasantsasany momba ny raharaha Noticiero Digital sy ny heloka bevava antserasera · Global Voices teny Malagasy
Fanamarihana sasantsasany momba ny raharaha Noticiero Digital sy ny heloka bevava antserasera
Voadika ny 02 Avrily 2019 2:52 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aprily 2010)
Nandritra ny diabe teo aloha, nanameloka ny tranonkala noticierodigital.com noho ny “famoahana vaovao tsy marina, nanambara ny fahafatesan'ny Minisitra Diosdado Cabello” ny filoha Venezoeliana, Hugo Chávez, ary nandidy ny [fampanovana ankapobeny] mba hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana [indrindra – lahatsary]
Ny zava-misy: Ao anatin'ny Lalàmpanorenana Venezoeliana, tsy manana fahefana “handidy” na inona na inona amin'ny Fampanoavana ankapobeny [Minisi-panjakana] ny filoha, satria fahefam-panjakana roa miavaka sy mitovy izy ireo, izay samy manana ny fahefany voafetra sy tena samihafa. Na izany aza, nomen'ny filoha baiko ny fampanoavana hametraka fitoriana ny Noticiero Digital, ary nankatòa ny baikony ny lehiben'ny fampanoavana. Ankoatra izay, nilaza ny lehiben'ny fampanoavana, Luisa Ortega Díaz fa ny Fivoriambe no hamoaka lalàna momba ity raharaha ity, mahatonga anay hahita ny tsy fahalalany ny rafitra ara-pitsarana Venezoeliana, satria efa ahitana fehezan-dalàna maro momba ny fanalam-baraka, ny faniratsirana sy ny vaovao diso ny lalànanay momba ny heloka bevava,. Na izany aza, tsy very kokoa noho ireo mpitarika ara-politika hafa izy, toa an-dry Aristobulo Isturiz, minisitry ny fampianarana teo aloha, izay nilaza fa izay rehetra mampiasa aterineto dia voafatotry ny Lalàna momba ny andraikitra ara-tsosialy, na dia mikasika ny olana mifandray amin'ny fifandraisana amin'ny radio sy fahitalavitra fotsiny aza ilay lalàna.
Nilaza ny Antenimieram-pirenena fa hitory izy ireo ary hanadihady momba ity hetsika tsy ara-dalàna ity.
Ny zava-misy: Miaina ao amin'ny firenena manana fetra ara-dalàna eo amin'ireo Fahefan-panjakana isika, fara-faharatsiny ara-teoria, ary tsy fahefan'ny Antenimieram-pirenena, izay manao lalàna no tena asany, fa tsy mampihatra ny lalàna nataon'izy ireo. Raha mandray fepetra amin'ity raharaha ity ny Antenimieram-pirenena, dia mitsabaka amin'ny seha-pahefan'ny mpampanoa lalàna izy ireo, izay miteraka ny antsoina hoe “fanararaotam-pahefana”.
Ao amin'ny tranonkala Noticiero Digital, mbola nijanona roa andro taty aoriana ilay vaovao tsy marina niteraka disadisa. Navoakan'ireo mpiserasera tao amin'ny iray amin'ireo sehatra fiadian-kevitr'izy ireo izany, izay miharihary fa nampiasa solon'anarana ary voalaza fa nisoratra anarana tao amin'ny tranonkala talohan'ny namoahana ilay vaovao mampifaditra.
Ny zava-misy: Tsy misy toro-hevitra ara-dalàna manokana ho an'ity karazana “heloka bevava antserasera” ity, saingy tsy ilaina ihany koa. Araka ny voalazan'ny Fehezan-dalàna mifehy ny heloka bevava, heverina ho heloka bevava ny famoahana vaovao tsy marina, ary voasazy an-tranomaizina hatramin'ny dimy taona. Azo antoka fa tsy faritany ary tsy ho faritany tsy misy lalàna ny aterineto, na dia miha-sarotra kokoa tsy toy ny mahazatra aza ny toetra mampiavaka azy manokana mba hanadihadiana sy hamaritana raha nisy heloka bevava natao tany amin'ny faritra iray manokana ary noho izany, eo ambany fampiharana lalàna. Na izany aza, raha misy, ny olona voampanga amin'io heloka bevava io dia ireo izay namoaka vaovao diso tao amin'ny seha-pifanakalozan-kevitra, fa tsy ireo izay mitantana ny tranonkala, izay tsy tompon'andraikitra mazava amin'ny hevitra sy vaovao avoaka amin'ny alalan'ny “sehatra ho an'ny fandraisana anjara” amin'ny tranonkala, ny mpiserasera ihany no hany tompon'andraikitra tokana amin'ny hevitra sy vaovao avoakan'izy ireo.
Ny marina momba ny heloka bevava amin'ny torohay diso koa dia tsy ampiasaina firy izany amin'ny olona izay mandefa vaovao miteraka savorovoro eo amin'ny fiarahamonina, fa amin'ny olona tena voafaritra manokana mandray anjara amin'ny raharaha tena manokana, indrindra indrindra mikasika ireo olo-malaza ara-politika – na indraindray, ny fianakavian'izy ireo – tahaka ity indray mitoraka ity.
Ahitana fijery tsara kokoa momba ny raharaha, ato amin'ny Global Voices Advocacy: Venezoelà: Ahiahy amin'ny fifehezana ny aterineto.
Torohay bebe kokoa amin'ny firafitry ny Fanjakana Venezoelana, jereo ny antontan-kevitra ofisialy: Estructura del Estado (esp).
Amin'ny teny espaniola ihany koa, jereo ato ny fanambaràn'ny minisitra teo aloha, Aristobulo Isturiz, sy ny filazana nataon'ny lehiben'ny fampanoavana Luisa Ortega Díaz.
Fanoherana 11 Mey 2021